Afgooye oo ganacsigii la hakiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Afgooye oo ganacsigii la hakiyay
Waxaa maanta hakad ku jira dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa degmada Afgooye ee Gobalka Sh.hoose, halkaas oo looga bartay dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo aad u balaaran.
Howl hakinta ayaa ka danbeysay kadib markii Xisbiga ka taliya halkaasi ay weydiiyeen ganacsatada deegaankaasi lacago kumanaan Doolar ah, taas oo la sheegay in lagu fulinayo howl bulshada wax tar u leh.
Ganacsatada ayaa ka dhiidhisay u hogaansimada arimahaasi waxaana shalay ay ku ekeed mudo loo qabtay ganacsatada in ay lacagtaasi ku bixiyaan, waxaana saakay kooxa hubeysan oo ka tirsan xisbiga ay irdaha isugu dhifteen suuqa isla markaana ganacsatada ayaa looga yeeray Saldhig ay halkaasi ku leeyihiin.
kadib kulan qaatay mudo oo u dhaxeeyay ganacsatada iyo horjoogayaal xisbiga ah ayaa waxaa lagu qasbay ganacsatada si howshooda ay u socoto in ay bixiyaan lacagta iyadoona ay ogolaadeen bixinta 15-kun oo doolarka maraykanka ah.
Kol hore ayeey aheyd markii kooxda xisbiga ay wadada isku xirta Muqidsho ilaa iyo Afgooye ka bilaabeen aroorinta lacago ay ugu magac dareen taakuleynta dhismaha wadada taasoo ilaa iyo hadda aanay jirin wax ay ka qabteen wadadaasi oo dhisma ah.